Sida loo qabto dhammaan Shiny Pokémon | Androidsis
Ignacio Sala | 10/07/2021 18:00 | Ciyaaraha Android, Pokémon Go
Pokémon Go waa mid ka mid ah cinwaannada ugu waawayn adduunka. Iyada oo malaayiin ciyaartoy ah maalin kasta, ciyaar isku dhafan qabashada Pokémon iyo adduunka dhabta ah. Shiny Pokémon waa kuwa dhif ah ee ka jira Pokémon GO, laakiin mahadnaqa hagahan, waxaan kaa caawin doonaa inaad ku xoojiso istiraatiijiyaddaada Qabsada Shiny Pokémon.
Pokémon GO wuxuu ku qarxay caan sanadkii 2016, halkaasoo tababarayaasha Pokémon ay u soo baxeen waddooyinka oo ay qabsadeen 151 Pokémon waa la heli karaa. Ciyaartoydu waa inay sahamiyaan deegaanadooda dhabta ah si ay u helaan Pokémon oo ku qarsoon buuraha dhaadheer, hawdka qoto dheer, ama ku xiga gurigooda.
1 Maxay yihiin Shiny Pokémon Pokémon Go?
2 Dhammaan noocyada Shiny Pokémon
2.1 Jiilka 1aad Shiny Pokémon
2.2 Jiilka 2aad Shiny Pokémon
2.3 Jiilka 3aad Shiny Pokémon
2.4 Jiilka 4aad Shiny Pokémon
2.5 Jiilka 5aad Shiny Pokémon
2.6 Jiilka 6aad Shiny Pokémon
3 Sida loogu qabto Shiny Pokémon Pokémon GO
4 Tilmaamaha lagu soo qabto Shiny Pokémon
5 Tabaha lagu qabto Shiny Pokémon
Maxay yihiin Shiny Pokémon Pokémon Go?
Si fudud loo dhigo, Shiny Pokémon waa noocyo kala duwan. Waxaa jira hal nooc oo midab dhalaalaya ah halkii Pokémon. Noocyada qaar ayaa iska cad, sida Gyarados Shiny, oo casaan halkii buluug ah. Kuwa kale waa kuwo xariifsan, sida Shiny Bulbasaur ama Squirtle, oo isku midab ah laakiin midabbo yar ka duwan.
Dhamaan Pokémon leeyihiin nooc Shiny ah, laakiin Pokémon Go, Shiny Pokémon waa la furay inta lagu jiro Maalinta Bulshada ama dhacdooyinka kale ee gaarka ah ama iyada oo loo marayo cusbooneysiinta joogtada ah ee cinwaankani helo.
Hadaan Shiny la furin, si kasta oo ay u badan tahay Pokémon-ka aad qabato, waligaa ma heli doontid Pokémon Shiny ah. Dhinaca kale, marka la furo, Shiny Pokémon aad ayey ugu badan yihiin Pokémon Go marka loo eego kulamada waaweyn, gaar ahaan xilliyada dhacdooyinka.
Xitaa sidaas oo ay tahay, waa dhif iyo naadir, sidaa darteed ikhtiyaarka ugu fiican ee lagu helo Pokémon Shiny waa in la qabto mid kasta oo Pokémon ah oo muuqda. Tijaabinta Shiny waxay qaadataa waqti, laakiin markii aad ogaato noocyada iftiin kara, way sahlan tahay.
Dhammaan noocyada Shiny Pokémon
Jiilka 1aad Shiny Pokémon
La nadiifin karo
Jiilka 2aad Shiny Pokémon
Jiilka 3aad Shiny Pokémon
Si waali ah
Jiilka 4aad Shiny Pokémon
Si kas ah
Jiilka 5aad Shiny Pokémon
Jiilka 6aad Shiny Pokémon
Sida loogu qabto Shiny Pokémon Pokémon GO
Shiny Pokémon waa Pokémon oo leh kala duwanaansho midab duwan marka loo eego qaababkoodii asalka ahaa. Tusaale ahaan, Pokémon sida Trapinch badanaa waa oranjo dhalaalaya halka qaabkeeda dhalaalaya uu cagaar madow yahay.. Midab kale oo aan ahayn, ma jiraan wax asal ahaan si gaar ah ugu gaar ah xayawaankan.
Si kastaba ha noqotee, Shiny Pokémon aad ayey u yartahay in la helo. Foomamka dhalaalaya ayaa loo soo bandhigay taxanaha jiilka labaad ee leh Pokémon Gold iyo Silver, markii ciyaartoydu awood u yeesheen inay soo qabtaan Shiny Gyrados oo ku taal Harada Cadhada.
In Pokémon Go, Fursadaha ku soo galaya Shiny Pokémon waa qiyaastii 1 ee 450. Waxaa jira daqiiqado cayiman oo ciyaarta ah oo fursadahaaga midkood aad ugu sii kordheyso.
Waxa ugu horreeya ee la ogaado ka hor intaadan u bixin qabashada Shiny Pokémon waa inay jiraan lix siyaabood oo kala duwan maareeyaan in lagu soo qabto noocyada dhalaalaya ee Pokémon GO:
Ukunta oo dillaacdo
Noocyada duurjoogta ah
Hawlaha cilmi baarista
Si kastaba ha noqotee, haddii aan dhab ahaantii dooneyno inaan ku guuleysano dadaalkeenna qabashada, waxa ugu wanaagsan ee aan sameyn karno waa sug maalinta Beesha taas ayaa loo dabaaldegay bilaha Pokémon Go, sida aan gadaal u sharraxno.
Tilmaamaha lagu soo qabto Shiny Pokémon
El Maalinta bulshada Waa dhacdo ka dhacda bishiiba mar Pokémon GO. Inta lagu jiro Maalinta Bulshada, Pokémon gaar ah waxay kordhin doontaa heerkaaga dhalashada waqti xaddidan. Inta lagu jiro waqtigan, Pokémon wuxuu si muuqata uga muuqan doonaa khariidada sidaa darteedna fursadaha lagula kulmayo Shiny Pokémon ayaa ka sarreeya.
Ciyaartoyda ayaa soo sheegay inay yihiin 10-20 Shiny Pokémon maalintii Bulshada. Marka ugu horeysa, fursada sii kordheysa ee la kulanka Shiny Pokémon inta lagu jiro Maalinta Bulshada waxay leedahay wax badan oo ku saabsan tirada isku dayga lagu qabanayo Pokémon.
Si aad u hesho wax badan oo dhalaalaya Pokémon, halkii aad ka qaban lahayd Pokémon kasta oo muuqda, waa inaad ka carartaa dagaalka oo aad u gudubtaa Pokémon soo socda. Tani waxay u oggolaaneysaa ciyaartoyda inay rhubi Pokémon kasta illaa aad ka hesho mid dhalaalaya. Sidoo kale, Pokémon Legendary gaar ah wuxuu yeelan karaa noocyo dhalaalaya markii lala dagaallamayo weerarada.
Jidka dhalaalaya Waxay soo muuqan doontaa oo keliya ka dib markii laga adkaaday Pokémon dagaalka. In kastoo, waxaa muhiim ah in la ogaado in dhammaan Pokémon aysan haysan qaab dhalaalaya. Si loo kordhiyo fursadaha dhalashada Pokémon dhalaalaya inta lagu jiro weerarada, duulaanka ayaa u baahan doona xaflad buuxda.
Waxaa lagugula talinayaa inaad weerartid ilaa 20 ciyaaryahan, taas oo kordhinaysa tirada fursadaha helitaanka noocyadan kala duwan ee Pokémon. Shiny Pokémon sidoo kale waxay leedahay xaddiga qabashada 100%, markaa waxaad u baahan tahay inaad ku jirto dhinaca nabdoon si aad u qabato.
Tabaha lagu qabto Shiny Pokémon
U isticmaal foox si kordhiya heerka taranka ee Pokémon. Waqtigaan la joogo, duruufaha ku hareeraysan COVID-19 awgood, Pokémon GO ayaa hoos u dhigay qiimaha Incense-ka ciyaarta dhexdeeda ah si ay ugu fududaato ciyaartoyda inay guryahooda ku ciyaaraan.
U isticmaal fooxa inta badan kordhin fursada la kulanka Shiny Pokémon. Shiny Pokémon oo la qabtay inta lagu jiray Maalmaha Bulshada aad ayey u yaryihiin, maadaama ay la imaan karaan dhaqaaq gaar ah markay isbeddelaan inta lagu jiro Maalinta Bulshada.
Hadafku waa inuu had iyo jeer noqdaa ugu yaraan 3 dhalaalaysa Pokémon inta lagu jiro Maalinta Bulshada. Haddii Pokémon uu leeyahay saddex marxaladood oo kala duwan Wareeggeeda isbeddelka, mid kasta oo mid ka mid ah wuxuu ku habboon yahay muujinta Shiny Pokémon.
Pokémon dhalaalaya runtii way ku fiican yihiin wax aan ka badnayn is muujin. In kasta oo dhammaan noocyada Shiny-ka aan laga wada jarin hal qaab, tusaale ahaan Rayquaza wuxuu leeyahay qaab dhalaalaya oo madow iyo madow, halka Pikachu uu leeyahay midab jaalle ah oo waxyar ka yara duwan.
Mid kasta oo dhalaalaya wuxuu leeyahay muuqaal u gaar ah, taas oo ah iyaga ka dhigaysa mid iyaga u gaar ah markasta oo ay muuqdaan. Sidoo kale, mar kasta oo midkood ka soo muuqdo ciyaarta, waxay leedahay animation fiican sidaa darteed waa wax lagu qanco in lagu daro noolahaan dhifka ah ururintaada, gaar ahaan marka laacibku ku turunturoodo Pok'emon dhalaalaya isagoon xitaa isku dayin.
Waxaa jira guud ahaan bulshada agagaarka ciyaartoyda Pokémon kuwaas oo u heellan ugaarsiga Pokemon Shiny, markaa haddii aadan ka mid ahayn mid ka mid ah bulshooyinkan weli, waa inaad bilowdaa inaad sameyso haddii aad rabto ballaadhi ururintaada ee Shiny Pokémon.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Sida loo qabto dhammaan Shiny Pokémon